Home » Other - Non Channelized » အမြင်
မိဘကောင်းတိုင်းကိုသင်တွေ့ ဖူးလိမ့်မည်။ မြင်ဖူးလိမ့်မည်။ သို့ပေမယ့် သင်၏အမြင်တွင် မိဘတိုင်း သာသမီးတွေအပေါ်အလွန်ကောင်းလိမ့်မည်ဟုထင်ပါသလား..။ ကျွန်တော်မြင်ဖူးသော မိသားစုတစ်စုအကြောင်းကိြုေ ပာချင်ပါသည်။ ထိုမိသားစုသည် သားသမီးကိုးယောက်ရှိသည်။
သားသမီးတစ်ဦးချင်းဆီ၏ ပညာရေးများသည် သာမာန်ဖတ်တတ် ရေးတတ် သေစာ ရှင်စာရေးတတ်ရင်တော်ပြီ ဟု အတိုင်းအတာထားသော မိဘများဖြစ်သည်။ အုပ်ထိန်းသူမိဘများသည် သားသမီးတွေကို ဆက်ဆံရာတွင် ဘေးမှကြည့်လျှင် သားသမီးအရင်းမှ ဟုတ်ပါလေစ ဟု တွေးမိကြမည်ထင်ပါသည်။
ထိုမိသားစုနှင့်ယှဉ်လျှင် ကျွန်တော်မိဘများ၏ လိုက်လျှောမှုများကို ကျေနပ်ပီတိဖြစ်ရသည်။ ထိုမိသားစု၏ ထမင်းဝိုင်းကို တိုက်ဆိုင်ပြီး ရောက်သွားဖူးသည်။ သူတို့၏ အမေနှင့်အဖေက ထမင်းတစ်ဝိုင်း သားသမီးကိုးယောက်တစ်ဝိုင်း သီးခြားခွဲစားကြသည်။ နောက်ပြီး ထမင်းစားရာတွင် ဟင်းများသည် တစ်မိသားစုတည်းအတူတူမဟုတ်ပါ။ အမေနှင့်အဖေကတစ်မျိုးဖြစ်ြ ပီး၊ သားသမီးတွေကတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ အမေဖြစ်သူက အိမ်ထောင်ဦးစီးအတွက်ဟုဆို က ချက်ထားသောဟင်းများကို မည်သည့်သားသမီးမှမတို့မထိရ ။ ယောင်မှားပြီး စားမိသည်ဆိုက ပြင်းထန်သောရိုက်ချက်တွေကိုလှိမ့်နေအောင်ခံရတော့သည်။ ဘယ်သောအခါမှ သားသမီးများကို ဟင်းကောင်းချက်ကျွေးသနည်းေ တာ့ဖြင့်မသိ။
သားသမီးတွေကို စည်းနှင့်ကမ်းနှင့်ထားချင် သည်ဟု ဆိုသော်လည်း နည်းမှားနေသယောင်။ သူ့တို့၏သားသမီးများကိုချက်ကျွေးနေသောအချိန်တွင်လည်း စေတနာပါချက်ကတော့ ကမ်းကုန်သည်လား ဝေခွဲမရပါ။ ငါးပိရည်ကြိုသည် နေ့တိုင်းမပါမဖြစ် ဟင်းလျာဖြစ်လို့နေသည်။ ဟင်းတစ်ခါချက်လျှင် သားတွေ သမီးတွေအတွင်ဆိုက ဆားတွေကုတ်ထည့် ၊ အရည်ကျဲကျဲ အရသာမရှိနှင့် စားရသည့်သားသမီးတွေ ခံတွင်းမှတွေ့ရဲ့လားဟု တစ်ခါမျှမမေး။ စားလျှင်စား မစားရင် ဗိုက်မှောက်အိပ်ရန်သာရှိသည်။
ထိုမိသားစုနှင့်စာလျှင် ကျွန်တော်၏ မိဘများကိုပိုပြီး အလေးထားချစ်ခင်လာစမြဲပင်။ မည်သည့်အစားအစာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်သောအခါမျှ မည်သူ့အတွက် ဆိုပြီး ချန်ထားသည်မရှိ။ အားလုံးသော သားသမီးအတွေသည် တန်းတူသာပင်။
ကျောင်းပိတ်ရက်များတွင် ကျပန်းအလုပ်အပြင် အိမ်ဗာဟီရအလုပ်များဖြစ်သော အရက်ချက်ခြင်း၊ ၀က်စာကျွေးခြင်း၊ အ၀တ်လျှော် ၊ ၀က်စာရိတ် စသဖြင့် ကလေးပီပီ ကစားရသောအချိန်တွေသည် သူ့တို့၏ စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်များသာဖြ စ်ခဲ့သည်။ အရွယ်နှင့်မမျှအောင်ပင် စေခိုင်းသောအလုပ်များသည် ကျွန်တော့်၏ အိမ်တွင်လုပ်ရသော အလုပ်များထက်ကြီးလေးသည်များလည်းပါသည်။ ကျောင်းနေရန်အတွက် ကျောင်းအပ်ငွေကိုလည်း နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်များ တွင် ပန်းရံ၊ ထင်းတိုက်၊ သဲတိုက်၊ အ၀တ်လျှော် စသဖြင့် သားသမီးတွေအားလုံး အအားနေသူတစ်ယောက်မှမရှိစေရ ရှာရမည်။ အလုပ်မလုပ်လျှင် ကျောင်းမတက်ရဟုဆိုသည်။ ထိုကြောင့်ပင် သူတို့တွေသည် ပညာရေးဖက်တွင်ထွန်းပေါက်ရန်အားလျှော့သွားသည်ဟုထင်ပါသည်။
သည်လိုဆိုတော့လည်း ကျွန်တော့်မိဘများကို အတိုင်းမသိ ကျေးဇူးတွေတင်နေမိပြန်သည်။ ကျွန်တော့်တို့၏ လိုအပ်ချက်များကို မညည်းမငြူဖြည့်ဆည်းပေးသည်ကို ၀မ်းသာရပါ၏။ ပညာရေးကို ဦးစားပေးရမည်ဟု မည်သည့်အလုပ်မျှမခိုင်းရက် သည့် အမေနှင့်အဖေ၏ ချစ်ခြင်းသည် မည်သို့သောအရာနှင့်လဲရမည်န ည်း။ နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်တွေသ ည် ကျွန်တော့်တို့အဖို့တော့ ပျော်စရာအချိန်များသာပင်..။
အရွယ်ရောက်လာသောအချိန်တွင် လည်း သားသမီးများကို ဆင်နိုင်ပါလျှက်ဖြင့် ဖြစ်သလိုထားသည်။ သူတို့ပါသာ သူတို့ရှာပြီးဝတ်လိမ့်မည်ဆိုပြီးပြစ်ထားသည်။ ကျောင်းနေစဉ်အရွယ်ကတည်းက မိဘထံမှပေးဖူးသည်မရှိသော မုန့်ဖိုးသည် အရွယ်ရောက်လာသည့်တိုင် တစ်ဆိုတစ်ခါမျှ ရဖူးသည်ဟု မထင်ပါ။ ကျောင်းနေစဉ်တစ်လျှောက်လုံးလုံး ကျွန်တော်သည်သာလျှင် ထိုမောင်နှမများ၏ ဆိုးသူကောင်းဖက် စားအတူ သွားအတူ သူငယ်ချင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ သူ့တို့တတွေ၏ အားကျသောအကြည့်တွေကို လက်ခံခဲ့ရသည်။ သို့ဆိုလျှင်လည်း ကျွန်တော်ရသောမုန့်ဖိုးများသည် ထိုမောင်နှမများ၏ အာဟာရဖြစ်သွားသည်ကို ကျေနပ်ပီတိဖြစ်နေမိသည်မှာမ ဆန်းပါ။ စားချင်တိုင်းမစားရ သွားချင်တိုင်းမသွားရ ကစားချင်တိုင်း မကစားရသော ထိုမောင်နှမများကို ကိုယ်ချင်းစာ သနားမိပါသည်။
ထို့နောက် မိသားစုလိုက်အိမ်ပြောင်းသွားသည့်နောက်ပိုင်း မတွေ့ဖြစ်သော်လည်း ကြားသိနေရပါသည်။ မိဘဖြစ်သူများသည် သားသမီးများကို ကိုယ်ခြေထောက်ပေါ် ကိုယ်ရပ်ဟုဆိုကာ နယ်စပ်မြို့တစ်မြို့ကိုပြောင်းသွားကြောင်း၊ အိမ်ဌားနေရကြောင်း ၊ ကျောင်းပြီးအောင်တစ်ယောက်မှမနေရကြောင်း၊ ကိုယ်ကိုကိုယ်ရှာစားနေရကြောင်း၊ ထွက်သွားကတည်းက ငွေကိုတစ်ခါသာ ပို့လာဖူးကြောင်း၊ ကျွန်တော်နှင့်ကျောင်းတစ်တ န်းတည်း တက်ခဲ့ဖူးသူမှာ ပြောပြပါသည်။ သူတို့၏ အကြောင်းကိုကြားရသောအခါ ကျွန်တော့်၏ စိတ်ထဲတွင် မည်သို့သောဝေဒနာတွေ ကိန်းဝပ်သွားမှန်းမသိတော့ပါ..။
အဘယ်အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ချင်သလိုဖြစ်ဟု ထားရက်ပါသနည်း။ ကျွန်တော့်ကတော့ဖြင့် မိဘများကို ကျေးဇူးတွေအလီလီတင်နေမိပြန်ပါသည်။ သင်တို့ရော မိမိ၏မိဘများအပေါ်မငြိုငြင် ကြပါနှင့်ဟု စေတနာစကားပါးလိုက်ပါသည်။ မိမိအပေါ်တွင် မွေးစမှ ယနေ့အထိ ပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့သည်များကို အမြဲအမှတ်ရစေချင်ပါသည်။ တစ်ခုခုကြောင့် မိဘများကို စိတ်ခုနေရင်တောင် ချက်ချင်းမိမိစိတ်ကိုပြင်ြ ကစေလိုသည်။ မြင့်မိုရ်တောင်ဦးမကကြူးသ ည့် ကျေးဇူးကြီးလှမိနှင့်ဘ ဟုသောဆိုရိုးစကားလေးကို နှလုံးသွင်းကြစေလိုပါသည်…။မည်သို့ပင်ဆိုစေ ကောင်းသည်ဖြစ်စေ မကောင်းသည်ဖြစ်စေ မိဘကတော့ မိဘပင် ။ မပြစ်မှားမိဖို့အရေးကြီးပါ သည်..။သင်တို့ရော မိမိတို့၏ မိဘများအပေါ် မည်သို့သောအမြင်များ မြင်ကြည့်ဖူးပါသနည်း..။ ကောင်းသည်လား ၊ ဆိုးသည်လား…. စိတ်ကိုဖြင့် ဖြူဖြူစင်စင်ထားပြီး မြင်ကြည့်ကြစေလိုပါသည်..။
ကျနော့်အမေကတော့..သားသမီးတွေသာ သူ့ဘ၀အတွက် ပထမပဲ။ ကျေးဇူးကြီးလှပါတယ်အမေ….
တစ်မျိုးကြီးပဲနော် မိဘနဲ့ မတူပဲ ခိုင်းစားဖို့မွေးထားတာနဲ့ တူသလိုပဲ။
ပတ်ဝန်းကျင်အနေအထား အသိပညာ နဲ့ ရွေးချယ်ခွင့်တွေနဲ့ချီနှောင်လာရင်
အကောင်းဆုံး က လူတွေကို အသိပညာ များများပေးဖို့ ပါပဲ